बिपीको समाजवाद : नकेलाइएका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम - Naya Patrika
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला र जीवनस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विचार उनकै हो । दुई–तीनपटक मात्रै बियटरिस वेबसँग भेट भए पनि फेबियन प्रभावमै गैरवाम राजनेता विन्स्टन चर्चिलले समेत सन् १९०८ मा आफू मन्त्री बन्दा जनजीविकासँग सम्बन्धित पाँच न्यूनतम आधारभूत मापदण्डको प्रस्ताव क्याबिनेटमा पु-याएका थिए— बेरोजगार बिमा, अपांग बिमा, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा, सडक निर्माणमार्फत रोजगारी सिर्जना र रेल्वे सञ्जालको राष्ट्रियकरण ।
नोभेम्बर १९१७ मै अर्को के भयो त ? सिड्नी वेबले बेलायती लेबर पार्टीको विधान लेखे । एक वर्षपछि पारित त्यस दस्ताबेजको दफा ४ मा के लेखियो भने श्रमिकको मिहिनेतबाट आर्जित सम्पूर्ण प्रतिफलको प्रत्याभूतिका लागि उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनमा ‘सामूहिक स्वामित्व’ कायम रहनेछ । राष्ट्रियकरणको पैरवी गरेको त्यो वाक्यले नै लोकतान्त्रिक बेलायतमा समाजवादी दलको जन्म गरायो ।
बेलायतले पाउन नसकेका सर्वोत्कृष्ट प्रधानमन्त्रीको सीमित (काल्पनिक) सूचीमा गेट्सकेल पर्छन् । तर, उनले पार्टीको महाधिवेशनमा दफा ४ को परिमार्जन गर्न गरेको प्रयास विफल मात्र भएन, त्यसपछि दफा ४ हरेक लेबर पार्टीका सदस्यको कार्डको पछाडि छापिने व्यवस्था नै गरियो । उनको घाउमा नुनचुक छरियो । अर्को दुई दशकसम्म बेलायतको लेबर पार्टीले स्टिल उद्योग, ब्रिटिस लेल्यान्ड, एरोस्पेसजस्ता उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिरह्यो ।
उनले राष्ट्रियकरण वा सामूहिक स्वामित्व झल्कने अंश हटाए र आफ्नो विधानमा नयाँ भाषा लेखाए– ‘लेबर पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी दल हो । एकल प्रयासभन्दा सामूहिक प्रयासको बलले नै हामी हाम्रा सम्भावनाको सच्चा प्रस्फुटन गराएको देख्न सक्छौँ र त्यस्तो समाजको निर्माण जहाँ शक्ति, सम्पत्ति र अवसर थोरै हैन धेरै जनताको हातमा हुनेछन् ।’ मतदातामा सन्त्रास नभई आशा जगाउनुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी तेस्रो बाटोको निर्धारण पुनर्गठित लेबर पार्टीले ग-यो ।
राज्यनिर्देशित लेनिनवादी समाजवादको अन्त्यसँगै पुँजीवादको बहुरूपी लहर विश्वमा फैलनु भनेको वास्तवमा मार्क्सको मौलिक विश्लेषणको विजय हो । तर, पुँजीवादको दुर्बल पक्ष देख्ने र यो अमर छैन भन्ने पनि मार्क्स नै हुन् । कहिले नासिन्छ त पुँजीवाद ? मार्क्सले पनि भनेनन्, किनकि उनी चलायमान सामाजिक इतिहासका अन्वेषक थिए, ज्योतिषी थिएनन् । २०औँ शताब्दीमा पुँजीवादका अग्राह्य पक्षको सम्बोधन गर्न त्यो व्यवस्था सिर्जनशील र गतिशील देखियो, जुन मार्क्सले उत्पादनको हकमा कल्पना गरेका थिए, तर वितरणमा गरेका थिएनन् ।
मार्क्स आफूलाई मार्क्सवादी मान्थेनन् । तर, उनलाई कम्युनिज्मको पर्याय बनाइयो । २०औँ शताब्दीभर उनको नाममा भएका कम्युनिस्ट प्रयोगबाट मार्क्सवाद अलग्याउँदा उनीप्रति बढी न्याय हुने मत प्रबल बन्न थालेको छ । ‘मार्क्सको बदला’का लेखक एवं माक्र्सवादी अर्थशास्त्रका सुविख्यात प्राज्ञ लर्ड मेघनाद देसाईं भन्छन् – कार्लमार्क्सले उद्योगको राष्ट्रियकरणको वकालत कहिले पनि गरेनन् । बजारको ठाउँ केन्द्रीय योजना पद्धतिले लिनुपर्छ पनि भनेनन् । उनी भन्साररहित स्वतन्त्र व्यापारका हिमायती थिए । उनले कुनै राजनीतिक दलको स्थापना चाहेनन् र एकदलीय व्यवस्थाको त कल्पना पनि गरेनन् । शक्ति हत्याउन त्रास, तिकडम र गुटगत षड्यन्त्रको उपयोग उनका लागि ग्राह्य थिएन । स्वभावका हिसाबले सायद उनी केही अप्ठ्यारा मान्छे थिए, तर कसैको कुभलो चिताएनन् ।
केका लागि ? नेपालमा ‘कोही पनि भोका–नांगा वा निरक्षर नरहून्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराको अभाव नरहोस् ।’ उत्पादन र वितरणका ‘इकोसिस्टम’बीचको समन्वय लोकतन्त्रले नै गर्नेछ । यी शाश्वत लक्ष्य बिपीको समाजवादका साध्य हुन् । साधन भने देश, काल, परिस्थितिअनुसार फेरिए ।
पहिलो, शास्त्रीय साम्यवादको पतन, चीनको पुनरुदय र विकाससँगै हुने लोकतान्त्रीकरण । उहाँ बाचुन्जेल विकासको सोभियत मोडलले शंकाको सुविधा पाई नै रह्यो । कतै यो बाटो पनि विश्वसनीय विकल्प त होइन ? आजका बिपीले साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपे पुग्छ भन्नुहुन्नथ्यो । आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सन्तुलित पहलमा नर्डिक मुलुकहरू किन सफल रहे भन्ने कुराप्रति सायद उहाँको चाख बढ्थ्यो ।
रोजगारी सिर्जनाबारे पनि बिपी यति संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ त उहाँ ‘लडाइट’ नै जस्तो सुनिनुहुन्थ्यो (औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुँदा परम्परागत जागिर खोसिने डरले नयाँ मेसिन र प्रविधिको विरोध गर्ने समूहलाई ‘लडाइट’ भनिन्छ) । सम्पन्नताको एउटा खुट्किलो औपचारिक रोजगारी हुने गरेकोमा नयाँ प्रविधि र जनसांख्यिक बनोटले अब रोजगारीको मात्रा र प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन हुने र त्यो चुनौती सम्बोधन गर्न सीप र सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत प्याकेजको गृहकार्य गर्नुपर्नेछ, जुन समाजवादी अभिभारा पनि हो नै ।
वस्तुस्थितिको यस्तो आँकलन गरेपछि बिपीले के गर्नुहुन्थ्यो होला ? मुलुकका लोकतन्त्रवादीहरूले गर्नुपर्ने अबको चिन्तन–मन्थन यही हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिकै जगमा लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गरी निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहजीकरणमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना प्रक्रियालाई कसरी गति दिने ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका प्रतिफल अनि कमी–कमजोरीलाई समाजवादी संवेदनशीलताका दृष्टिले कसरी आत्मसमीक्षा गर्ने ? समग्रमा ‘डिपार्चर’ भने बिपी कोइरालाको नेतृत्व शैलीको झलक वा आंशिक पुनरावृत्तिले नै दिने थियो । नीति र कार्यक्रममा जुझारूपन, गतिशील समावेशी संगठन र नयाँ युवाको आबद्धताले लोकतान्त्रिक बहस र स्पर्धाको स्तर बढ्थ्यो ।
आत्मविश्वास, करिस्मा र नैतिक बल भएको राजनीतिले सार्वजनिक संस्थामा भरोसा बढाउने थियो । नेताका आचरणबाट नागरिकले प्रेरणा लिने दिन पनि आउँथ्यो । र, हाम्रो ध्येय विविधताको सम्मानसँगै राष्ट्रिय एकताको चेतना जागृत भएको आशावादी, समुन्नत समाज बनाउने हुन्थ्यो ।
(डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)